कसरी थाहा पाउने यदि तपाइँको आईफोन नया, नविकरण, व्यक्तिगत वा प्रतिस्थापन छ | आईफोन समाचार
पक्कै पनि, यदि तपाईं एप्पल स्टोरमा जानुहुन्छ र आईफोन किन्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई कुनै शंका छैन कि यो नयाँ टर्मिनल हो। साथै, यदि तपाईं ती मध्ये एक जो सामान्यतया पुनः सुधारित मोडेलहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ -मर्मत गरिएको- कुनै शंका छैन। यद्यपि यदि हामी दोस्रो-हात बजारको बारेमा कुरा गर्छौं भने के हुन्छ? तपाईले किन्न चाहानु भएको त्यो आईफोन कहाँबाट आयो भनेर निश्चित गर्नका निम्ति यो उत्तम हुँदैन र?
हामीले सिक्यौं, त्यहाँ types प्रकारका केसहरू छन् जुन तपाईं आईफोनमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ: नयाँ, पुन: शर्त, प्रतिस्थापन वा अनुकूलित। निस्सन्देह, पहिलो नजरमा, हामी तपाईंलाई कस्तो प्रकारको आईफोनको बारेमा कुरा गरिरहेछौं भनेर जान्न गाह्रो छ। अब, यदि यो दोस्रो हात खरीद हो, निश्चित रूपमा तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि त्यो मोडलले धेरै हातहरू पार गरिसकेको छ कि भनेर। र एचुलिडाड आईफोनबाट हामी तपाईको लागि यसको मूल पत्ता लगाउन सजिलो बनाउँदछौं।
एक नविकरण गरिएको आईफोन खरीद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यो लिंकमा तपाईले आईफोन मोडेलहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन पुन: शर्त गरीएको छ र ती ग्यारेन्टीको साथ बेचिन्छ कि उनीहरू राम्रो काम गर्दछन्। थप रूपमा, यदि तपाईं यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईंलाई यो मनपर्दैन भने, तपाईं यसलाई कुनै दायित्व बिना र अमेजनको सहजता बिना कुनै जोखिम लिई फर्काउन सक्नुहुन्छ।
जब तिनीहरू हामीलाई OSXDaiily बाट सिकाउँदछन्, केहि के साथ सेटिंग्स मेनू को माध्यमबाट साधारण चरणहरू हामी जान्न सक्दछौं कि यदि तपाईंको आईफोन नयाँ हो वा subse पछिको समूहहरूको। फेला पार्नको लागि, हामीले «सेटिंग्स to मा जानुपर्नेछ,« सामान्य on मा क्लिक गर्नुहोस् र हामीले «सूचना» मेनू प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। यस सेक्सनमा हामीसँग टर्मिनल सम्बन्धी सबै जानकारी हुनेछ: हामी प्रयोग गरिरहेको आईओएसको संस्करण, हामीसँग भण्डारण उपलब्ध छ; हामीले कति तस्बिरहरू भण्डार गरेका छौं; हामी के अपरेटर को उपयोग गर्छौं; क्रम संख्या र के हामीलाई रुचि दिन्छ त्यो अनुभाग हो जुन "मोडेल" दर्साउँछ।
तपाईले देख्नुहुनेछ कि यस अर्थमा भन्ने हो भने, चरित्रहरू जुन हामीलाई प्रस्तुत गर्दछन् त्यो एक पत्र भन्दा अघिको हो। यो हुन सक्छ: "M", "F", "P" वा "N"। तल हामी वर्णन गर्दछौं तिनीहरू मध्ये एक जनाको के हो:
«M»: त्यो चिठी हो जसले टर्मिनल हो भनेर पहिचान गर्दछ नयाँ एकाई
«F»: यो एक हुनेछ पुन: शर्त एकाई; एप्पलले यसलाई पुनर्स्थापित गर्यो र यसलाई राम्रो मूल्यमा बेच्छ किनकि यस अवस्थामा यो दोस्रो हात हो
«P»: यो एक हो अनुकूलन एकाई; त्यो यसको पछाडि कुँदिएको छ
«N»: हो प्रतिस्थापन एकाई त्यो प्रयोगकर्तालाई हस्तान्तरण गरियो किनभने मर्मत सेवा अनुरोध गरिएको छ, उदाहरणका लागि
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी थाहा पाउने यदि तपाइँको आईफोन नया, नविकरण, व्यक्तिगत वा प्रतिस्थापन छ
मेरो प्रकारको वास्तविक आईफोनको समस्याको कारण प्रतिभा पट्टीमा परिवर्तन हुन्छ र एन भन्छ।
त्यो रिपोर्टको लागि धन्यवाद मलाई मेरो आईफोन नयाँ छ कि राम्रोसँग प्रयोग गरिएको छ भनेर जान्नको लागि वास्तवमै मनपर्‍यो।
र यदि यो ए भन्छन् ??
जिज्ञासु, मलाई यसको बारेमा सचेत थिएन, सत्य यो हो कि मलाई यो रोचक लाग्छ कि मैले तपाईंलाई यो जानकारी दिएको छु।
जेभियर रुइज मर्सिया भन्यो
मेरो पनि एन भन्छन्। र मैले सोचे कि तिनीहरूले मलाई त्यो फिर्ता दिएका छन् किनभने मेरो थियो। यो दावी गर्न सकिन्छ?
जेभियर रुइज मर्सियालाई जवाफ दिनुहोस्
अभिवादन! यो तपाइँको आईफोनसँग कसरी गयो जुन मोडलले N N अक्षरबाट सुरू गर्‍यो?
नमस्कार राम्रो छ यदि एन मोडलमा देखा पर्दछ यसको मतलब यो नयाँ छैन वा यो नयाँ हुन सक्दछ यदि यो प्रतिस्थापन इकाई हो भने पनि?
अरुको जस्तै मैले वरपर देख्ने, मलाई मेरो मौलिकको साथ समस्या थियो र SAT ले यसलाई अहिले परिवर्तन गर्यो, जुन एकदम नयाँ थियो, तर यसको मोडेल नम्बर पनि "N" बाट सुरु हुन्छ। यो मर्मत गर्न सक्दछ, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले "मोबाइल मर्मत गरेको छु" जस्तो गरी मैले यसलाई उठाउँदा उनीहरूले मलाई "मर्मत" इनभ्वाइस पनि दिए (र यसको मूल मूल्यमा चिन्ह लगाइएको जुन नयाँ मूल्य हो) तर छुटमा मैले शून्य तिर्दा। तब मैले घटाउँछु कि "N" को मतलब मात्र यो होइन कि उनीहरूले तपाईंलाई फिक्स गर्दा यो loanण हो, तर तिनीहरू प्रतिस्थापन व्यक्ति हुन् जब तपाईंको फिक्सिंगको सट्टामा उनीहरूले तपाईंलाई अर्को युनिट प्रदान गर्छन्।
नाममा जवाफ दिनुहोस्
अहिल्यै मसँग प्रतिस्थापन +++ को साथमा मेरो ++ सिटमा छ र यसले "एम" भन्छ, मलाई थाहा छैन त्यो जानकारी कती भरपर्दो छ।
यो उस्तै हो भन्यो
मानिस, स्टोरले तपाईंलाई नयाँ टर्मिनल दिन सक्दछ यदि यो चाहान्छ र "उधारो" उपलब्ध छैन भने ...
उहीलाई जवाफ दिनुहोस्
जेभियर रुइज भन्यो
यस लेखमा जानकारी बिल्कुल गलत छ, र तपाईंले लगभग केही दिन अघि मेरो आईफोन x को बिक्री बर्बाद गर्नुभयो।
मैले मेरो आईफोन x खरिद गरे जुन दिनमा यो झन्डै एक बर्ष पहिले आयो र नम्बर एफ संग शुरु हुन्छ।
जब तपाइँको पाठ पढ्नुहुन्छ, एप्पल ग्राहक सेवा कल गर्नुहोस्, जुन धेरै परामर्श पछि, स्पष्ट रूपमा यस पृष्ठले रिपोर्ट गरेको खण्डन गर्दछ। उनीहरूले तर्क गरे कि सार्वजनिक बिक्रीको पहिलो दिनमा पुन: कन्डिशन्ड एकाई पाउनु असम्भव छ, र दोस्रो बाकसमा यसले समान क्रम संख्या राख्छ र पुन: सिफारिश इकाइहरू एप्पल बक्समा सबै सामानका साथ डेलिभर हुँदैन, तर भित्र ब्याज बिना बक्स (त्यो आईफोन with र मेरी श्रीमतीको एप्पल घडीको साथ मलाई भयो)।
र यो यो पनि हो कि मैले एक XS MAX खरीद गरें सोही दिन यो बिक्रीमा गयो र यसको नम्बर B FIN BBINS TB B मार्फत गयो।
यदि तपाईं आईफोनको बारे सोधपुछको लागि सन्दर्भ पृष्ठ हुन चाहानुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो सूचनाको पुष्टिकरण गर्नुपर्नेछ। यो सल्लाह हो। कहिलेकाँही कर्मचारीहरू दुर्घटनामा पर्दछन् र तपाईंसँग मुखबिरको जिम्मेवारी छ।
जेभियर रुइजलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई जाभियर बताउन माफ गर्नुहोस्, कि त्यहाँ धेरै पृष्ठहरू छन् जुन यी चिठ्ठीमा आधारित छन् जसले सक्कली पहिचान गर्न सक्दछ, वास्तवमा मसँग तीन वर्ष अघि आईप्याड छ, आईफोन र एप्पल वाच, र ती सबै एमको साथ सुरू हुन्छ। या त कोड परिवर्तन भएको छ वा म यो व्याख्या गर्दिन। अर्कोतर्फ, ती नयाँ उपकरणहरू ती अक्षरका साथ आउन धेरै दुर्लभ हुन्छ, जबसम्म उनीहरू ढाँचा परिवर्तन गर्दैनन्। म हेर्ने श्रृंखला of को सम्भावित परिवर्तनको लागि पर्खिरहेको छु, र यदि ती परिवर्तन भएमा, म यसलाई पहिलो व्यक्तिमा अनुभव गर्नेछु। शुभकामना।
जेभियरलाई पनि त्यस्तै भयो।
तपाईंले मलाई भ्रमित गर्नुभयो।
मँ छोडेको लगत्तै आईफोन एक्सएस किनेको छु, एमएममा, सील गरियो, र यसको सिरियल नम्बर एफबाट सुरु हुन्छ।
मैले जून in मा आईफोन bought प्लस किनें, एमएममा, सील गरियो, र यो एफबाट सुरु हुन्छ।
के तिनीहरूले मलाई नयाँ मोबाइल फोनको रूपमा पुन: शर्त गरी दुई मोबाइल फोन बेचेका छन्? वा एप्पलले नयाँ नविकरण उपकरणहरूको रूपमा वितरण गर्दछ?
सत्य यो हो कि अब तिनीहरूले मेरो मुखमा नराम्रो स्वाद दिएका छन्।
सबै उचित सम्मानका साथ, सज्जनहरू जो भ्रमित / ठग्ने महसुस गर्छन्; तपाइँ सचेत हुनुपर्दछ कि कम्पनीहरूले (केहि देशहरूमा केही एप्पल वितरकहरू, र अन्य ब्रान्डहरू) गलत गलत जानकारी दुरुपयोग उत्पादन बेच्न को लागी दुरुपयोग गर्छन्।
एप्पल वाच अघि व्हाट्सएप कारप्लेमा आउँदछ